ဆောငျးပါးရှညျ| ကလော့ပျ စငျတငျပေးမှုမှာ ကွယျပှငျ့ဖွဈလာဦးမယျ့ ၅၂ သနျးတနျ လီဗာပူးအသငျးသား - Sports Home Time
UNICODE – လီဗာပူးအသငျးသားတှေ webcam ကနေ ဆကျသှယျစကားပွောပွီး အှနျလိုငျးလကေ့ငျြ့ရေး အစီအစဉျတှကေို အတူတကှ လုပျဆောငျကွတော့ ယာဂငျကလော့ပျက ဗီဒီယို ဖှငျ့ဖှငျ့ခငျြးမှာ ဝမျးသာအားရ ချေါလိုကျတာက “Naby lad” တဲ့။
မာဆေးဆိုဒျဒသေထဲက ဖှနျဘီအရပျမှာရှိတဲ့ နအေိမျမှာ အခွားအသငျးဖျောတှလေိုပဲ နအေိမျမှာပဲ လော့ဒေါငျး နနေရေတဲ့ ကီတာက ကတုံးဆံတောကျ ဆံပငျကနေဲ့။ သူက မနျနဂြောကွီးကို ယောငျယောငျလေးပွုံးပွတဲ့ အနအေထားနဲ့ ယောဂ လကေ့ငျြ့ရေးကို ဆကျလုပျနခေဲ့တယျ။
“ မငျးခေါငျးက အဲ့ကနေဲ့ ကွညျ့ကောငျးတာပဲကှ ” လို့ ဗနျဒိုကျက ရယျမောပွီး ပွောတယျ။
ဂူနီယာကှငျးလယျလူဟာ လီဗာပူးစီနီယာအသငျးသားတှထေဲမှာ နာမညျကွီးတဲ့ ကစားသမားတဈဦးပါပဲ။ နိုငျပှဲတှရေပွီးရငျ အဝတျလဲခနျးမှာ ကတတျတဲ့ ကီတာ၊ မာနေးရဲ့ အရမျးရငျးနှီးပွီး ပြျောပြျောနတေတျတဲ့ ကီတာ။ ၂၀၁၈ ခုနှဈနှမှော လီဗာပူးကို ရောကျလာတဲ့ သူဟာ လီဗာပူးမှာ အသားကလြာနပေါပွီ။
ပငျကိုယျသဘောဝကိုက ကီတာက အရှကျကွီးတယျ။ အင်ျဂလနျစာကို သငျယူမှုတှေ လုပျနခွေငျးကနေ အကြိုးအမွတျတှေ ရလာနဟေနျလညျး ရှိတယျ။ မာဆေးဆိုဒျမှာ သူ နသေားကလြာနခေဲ့တယျ။ သို့ပမေယျ့ ကစားကှငျးမှာတော့ ကီတာက အခှငျ့အရေးကောငျးတှအေတှကျ ကွိုးစားနရေပါသေးတယျ။ လီဗာပူးကို ရောကျလာခဲ့တာ နှဈနှဈ ရှိပွီဖွဈပွီး အနျဖီးက မြှျောလငျ့ခကျြကွီးကွီးနဲ့အတူ သူ့ကို ပေါငျ ၅၂.၇၅ သနျးထိ အသုံးပွုပွီး ချေါယူခဲ့ရတယျ။
ကီတာဟာ သူ့ရဲ့ အရညျအခငျြးတှကေို ပွသဖို့ အခှငျ့အရေး စောငျ့နတေယျ။ သူ့ရဲ့ ကွံ့ခိုငျမှု အကောငျးဆုံး ပွနျရောကျစမေယျ့ အနအေထားကို စောငျ့နရေခွငျးကွောငျ့ အကျသလကျတီကို မကျဒရဈကို အရေးနိမျ့ပွီး ထှကျခှာခဲ့ရတဲ့ ခနျြပီယံလိဂျ ၁၆ သငျးအဆငျ့ ဒုတိယအကြော့ပှဲမှာ လီဗာပူးသမိုငျးအတှငျး တတိယမွောကျ ပွောငျးရှကွေ့ေး အမွငျ့ဆုံး ကစားသမားက အရနျခုံမှာတောငျ ရှိမနခေဲ့ရဘူး။
လီဗာပူးအသငျးဟာ ၁၈ လအတှငျးမှာ ခနျြပီယံလိဂျဖလား၊ ယူအီးအကျဖျအေ စူပါလိဂျ၊ ကလပျကမ်ဘာဖလား ဆိုတဲ့ ဆုဖလားတှေ အနိုငျရခဲ့တယျ။ ပရီးမီးယားလိဂျကို ဦးဆောငျထားပွီး ခနျြပီယံဖွဈဖို့လညျး နီးစပျနတေယျ။ မနျနဂြော ယာဂငျကလော့ပျ ချေါယူထားတဲ့ ကစားသမားတှထေဲမှာ ကလပျရဲ့ ရငျးနှီးမွုပျနှံမှုအပျေါ အကောငျးဆုံး ပွနျပေးဆပျနိုငျခွငျး မရှိသေးတဲ့ တဈဦးတညျးသော ကစားသမားက ကီတာပါပဲ။
လီဗာပူးက သူ့အတှကျ အသငျးပွောငျးကွေး ပေါငျ ၄၈ သနျးကို ပေးပွီး ချေါယူထားခဲ့တယျ။ သူကို ချေါယူခဲ့တာဟာ ကလော့ပျရဲ့ တောငျးဆိုမှုကွောငျ့ပဲ ဖွဈတယျ။ ပေါငျ ၅၂ သနျးထိ ပွောငျးရှကွေ့ေး မွငျ့တကျသှားနိုငျတဲ့ ကီတာဟာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှဈမှာ ဘှနျဒကျလီဂါအတှငျး ၃၁ ပှဲကစားကာ ကိုယျတိုငျ ၈ ဂိုးသှငျးပွီး ဂိုးထောကျပံ့မှု ၈ ကွိမျ လုပျပေးခဲ့တယျ။
ကလော့ပျက ကီတာဟာ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ ကှငျးလယျလူလို့ ယုံကွညျပွီး အရချေါယူစခေဲ့တယျ။ ကီတာက ဖနျတီးမှုနဲ့ ဖကျြဆီးမှုဆိုတဲ့ ကှငျးလယျတာဝနျ နှဈရပျလုံးကို အကောငျးဆုံး လုပျနိုငျတယျ။ မနျနဂြောကလော့ပျနဲ့ သသေခြောခြာ ဆှေးနှေးခှငျ့ရခဲ့တဲ့ ကီတာကို သူ့စိတျကွိုကျ နံပါတျဖွဈတဲ့ ကြောနံပါတျ ၈ ဝတျဆငျကစားခှငျ့ရဖို့မှာ ပရိသတျတှေ အမွငျမကွညျ မဖွဈစဖေို့ စတီဗငျဂရြတျကိုယျတိုငျ မဲဝုဒျမှာ ဂြာစီ လာပေးခဲ့ခွငျးဖွဈတယျ။
ကီတာရဲ့ အသိုငျးအဝိုငျးက လီဗာပူးပရိသတျတှေ မြားပါတယျ။ သူကိုယျတိုငျကလညျး ဂရြတျကို စံပွအဖွဈ လေးစားပွီး ကြောနံပါတျကိုယျတောငျ နံပါတျ ၈ ကိုပဲ ဝတျလရှေိ့တာပါ။ နယျမွသေဈကို စတငျ ခွခေခြိနျမှာ လီဗာပူးသမိုငျးမှာ အကွီးကယျြဆုံး အသငျးခေါငျးဆောငျတှထေဲက တဈဦးရဲ့ ဂြာစီကို ဝတျဆငျတာက ကီတာကို ဖိအားပိူမြားစခေဲ့တာလို့ ဒီဒီဟာမနျးက ယူဆထားတယျ။
သူ့ရဲ့ လီဗာပူးကစားသမားဘဝ ပထမဆုံးပှဲဖွဈတဲ့ ဝကျဟမျးနဲ့ပှဲမှာတော့ ကီတာဆိုတာ ဘယျလို ကစားသမားလဲ အားလုံး မွငျခဲ့ရတယျ။ ကှငျးလယျမှာ အားကောငျးတယျ၊ ပေါကျကှဲအားကောငျးပွီး လှမျးမိုးနိုငျစှမျး ရှိခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ ကွံ့ခိုငျမှုဆိုငျရာ တညျငွိမျဖို့ လိုအပျခွငျး၊ ကလပျနဲ့ လကျရှေးစငျကွား ရှေးခယျြရခွငျးတှမှော သူ့ရဲ့ ပုံမှနျပှဲထှကျခှငျ့က အတျောလေးကို လြော့ကသြှားခဲ့တယျ။ ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ တောငျးဆိုမှု အရမျးကွီးတာကို ကီတာ ဝနျခံပါတယျ။
ကီတာက ကံတရားရဲ့ ဖေးမမှုလညျး နညျးနညျးလိုခွငျးကို ရငျဆိုငျနရေတယျ။ သူက အခြို့ပှဲတှမှောဆိုရငျ သိပျကောငျးတယျ။ ကွံ့ခိုငျမှု ပွနျကောငျးလာသလို ကလော့ပျရဲ့ ယုံကွညျမှုကို ခံရပွီး ဘာစီလိုနာနဲ့ ယှဉျပွိုငျကစားရတဲ့ ခနျြပီယံလိဂျဆီမီးဖိုငျနယျ ပထမအကြော့ပှဲမှာ ပှဲထှကျလူစာရငျးကနတေောငျ ပါဝငျနပေမေယျ့ ဒဏျရာကွောငျ့ မကျဒရဈမှာကစားတဲ့ တီကိုနဲ့ပှဲကို လှဲခဲ့ရပွနျတယျ။
ခွစှေမျးကောငျးနခြေိနျမှာ ဒဏျရာပွနျရခဲ့တာက သူအတှကျ ခကျခဲပါတယျ။ နောကျပွီး ကစားသမားတိုငျး အိပျမကျမကျရတဲ့ ဗိုလျလုပှဲကို ဒဏျရာကွောငျ့ သူမပါနိုငျခဲ့တာပါ။ ဒဏျရာကိစ်စက မပွီးပါပွီး ဂူနီယာအသငျးက လကျရှေးစငျအတှကျ ချေါတော့ ရာသီကွိုကို လှဲခဲ့ရပွနျတယျ။ အဲ့မှာရခဲ့တဲ့ ဒဏျရာကွောငျ့ စူပါကပျပှဲအဖွဈ ခယျြဆီးနဲ့ပှဲကို ထပျလှဲပါတယျ။ စကျတငျဘာလအထိ မပါနုငိသလို နောကျပိုငျးမှာ အဖြားရောဂါ၊ အသေးစား ကွှကျသားဒဏျရာတှေ ထပျရခဲ့တယျ။
လီဗာပူးကှငျးလယျမှာ ဟနျဒါဆနျ၊ ဝိုကျနယျဒမျ၊ ဖာဘငျညို၊ မီလျနာ၊ ခြိနျဘာလိနျတို့တှကေ ကီတာကို ကြျောပွီး ပှဲထှကျခှငျ့တှေ ရထားကွတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီကစားသမားတှေ အားလုံးထဲမှာ ဖနျတီးမှုအတှကျ အမွငျရှိတဲ့ အပိုငျးမှာတော့ ကီတာက အားလုံးထကျ သာပါတယျ။ လီဗာပူးကှငျးလယျလူတှေ တဈရာသီ သှငျးဂိုး ၁၀ ဂိုး ရယူပေးဖို့ ခကျခဲပမေယျ့ ကီတာအတှကျဆိုရငျတော့ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဒါက ကလော့ပျရဲ့ ယုံကွညျမှုဖွဈပါတယျ။ ကလော့ပျက ကီတာဟာ ကှငျးလယျမှာ အခွားသူတှနေဲ့ ခွားနားသူလို့ မွငျတယျ။ ကလော့ပျက “ နာဘီနဲ့ ခြိနျဘာလိနျက ပငျကိုယျသဘာဝ မတူကွဘူး။ နာဘီက ပိုကောငျးကောငျး ကစားနိုငျပွီး ကစားတာ ပိုကောငျးတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့တာကွောငျ့တော့ အခှငျ့အရေး ပိုရမှာ မဟုတျဘူး ” လို့ ဝနျခံထားတယျ။
လီဗာပူးကှငျးလယျလူတှဟော ပေါကျကှဲအားကောငျးပွီး စိတျဓါတျ ပွငျးထနျကွတယျ။ ကီတာမှာက မတူညီတဲ့ အရညျအခငျြးတဈရပျ ရှိပါတယျ။ သူက အတှငျးလူနရောကနေ ကစားနိုငျသလို ပွိုငျဘကျအသငျးရဲ့ နရောလှတျတှကေို အသုံးခပြွီး လှုပျရှားနိုငျတဲ့ ဘောလုံးဉာဏျရညျ ပိုမွငျ့သူဖွဈတယျ။ အဆုံးသတျပိုငျး နယျပယျတှမှော ကီတာက ကနျြ ကှငျးလယျလူတှထေကျ ပိုကောငျးသူဖွဈတယျ။
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘောလုံးရာသီမှာ ကီတာဟာ ၄ ပှဲကိုပဲ ပှဲထှကျလူစာရငျးက ကစားရတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘောလုံး လှိမျခေါကျမှု အောငျမွငျအောငျ အမြားဆုံး လုပျနိုငျတဲ့ ကစားသမားတှထေဲ ပါပါတယျ။ လီဗာပူးရဲ့ ဘောလုံးစကေး အကောငျးဆုံးဖွဈတဲ့ ဖာမငျနိုတောငျမှ လှိမျခေါကျကြျောဖွတျမှုမှာ ၅၉% ပဲ အောငျမွငျပမေယျ့ ကီတာက ၇၃% ရှိတယျ။
လီဗာပူးက ဘယျလိုပွိုငျဘကျကို ရငျဆိုငျနရေသလဲအပျေါ မူတညျပွီး ကလော့ပျရဲ့ နညျးစနဈ အပွောငျးအလဲမှာ ကီတာက အရေးပါလာနိုငျပါတယျ။ ကီတာက ဘောလုံးမရှိခြိနျမှာ လှုပျရှားမှု နညျးတယျ၊ ပွိုငျဘကျတှေ ဘောလုံးပေးနရေငျ လိုကျပွီး ပိတျဖို့ဆိုတဲ့ အခကျြမှာ သူက အားနညျးတယျ။ ဒါပမေယျ့ လီဗာပူးက ပွိုငျဘကျကို လှမျးမိုးကစားပွီး ပွိုငျဘကျက ခံစဈမှာပဲ ပိတျကစားပွီဆိုရငျတော့ ဒါမြိုးက ကီတာအကွိုကျပါပဲ။ သူ မှနှေောကျကစားပါတော့မယျ။
“ ဘှနျဒကျလီဂါမှာတုနျးက ကီတာဟာ အကောငျးဆုံး ကှငျးလယျတိုကျစဈသမားတှထေဲ ပါဝငျသူပါ။ သူက လှတျလှတျလပျလပျ ကစားရသူလို့ မပွောလိုပမေယျ့ အခြိနျအမြားအပွားမှာ သူလုပျခငျြတဲ့အတိုငျး ကစားခှငျ့ရခဲ့တယျ။ တိုကျစဈကို ဘောလုံးနဲ့အတူ မောငျးနှငျနိုငျပွီး ဧရိယာထဲ ဝငျရောကျနိုငျစှမျးရှိတယျ။
ကလော့ပျက သူ့ကို ကစားစလေိုတဲ့အတိုငျး ပေးမကစားဘူးလို့ မပွောပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သူ့နားမှာကလညျး ထူးခြှနျတဲ့ ကစားသမားတှေ ရှိနတေယျ။ လိုကျဇဈမှာဆိုရငျ ကီတာက အဓိကလူပဲ သူကစားခငျြသလို ကစားလို့ရတယျ။ လီဗာပူးမှာက နောကျထပျ ငါကွီးကွီးတှေ ရှိနတေယျ။ ကိုယျနရော ကိုယျရှာနိုငျဖို့လိုတယျ။
လီဗာပူးမှာ တိုကျစဈသမား သုံးဦးနဲ့ ကစားရတာက လိုကျဇဈမှာနဲ့ တူမှာ မဟုတျဘူး။ ဖာမငျနိုက တီမိုဝါနာလို မဟုတျဘူး။ သူက တကိုယျတျော မကစားပဲ ခြိတျဆကျကစားတဲ့သူ။ လီဗာပူးက ကှငျးလယျလူတှရေဲ့ တိုကျစဈ မောငျးနှငျမှုကို အားမကိုးဘူး။ အဲ့တာထကျ ဘောလုံးကို ခပျမွနျမွနျ ပွနျယူပွီး အသငျးဖျောတှကေို ဘောလုံးပေးမှုနဲ့ ပှဲထဲ ပွနျဝငျလာတတျကွသူတှေ။
တိုကျစဈသုံးယောကျကလညျး အခှငျ့အရေး ဖနျတီးမှုမှာ ကိုယျတိုငျ လုပျနိုငျတဲ့ ကမ်ဘာအကောငျးဆုံးတှေ။ သူတို့မှာ တောငျပံသမားတှလေို ကစားနိုငျတဲ့ အစှနျသမားတှရှေိတယျ။ ဒီတော့ ကီတာရဲ့ ကှငျးလယျမှာ ဖနျတီးရှငျလို ကစားမှုက အသငျးကို ဟနျခကျြ မညီမှုတှေ ဖွဈစတေယျ။ အဲ့တာကပဲ ကီတာက သူ့ရဲ့ အရညျအခငျြးကို အပွညျ့အဝ မပွနိုငျတဲ့ အကွောငျးရငျး ဖွဈနိုငျတယျ ” လို့ ဟားမနျးက သူ့အမွငျကို ရှငျးပွခဲ့တယျ။
လီဗာပူးအသငျးက နှမှော ကှငျးလယျအတှကျ အငျအားဖွညျ့မှုကွီးတှေ မလုပျဘူးလို့ သတငျးထှကျထားတယျ။ ဒါကလညျး ခြိနျဘာလိနျနဲ့ ကီတာတို့ကို နရောပေးလိုခွငျးကွောငျ့ပါပဲ။ ပေးရတဲ့ ပွောငျးရှကွေ့ေးနဲ့ ထိုကျတနျအောငျတော့ ကီတာက ခွစှေမျး မပွထားနိုငျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ကီတာကို ယုံကွညျ့သူက ကလော့ပျဖွဈတယျ။ ကလော့ပျဟာ သူ့ကို ယုံကွညျရငျ လေးနှဈအတှငျး ဆုဖလားယူပွနိုငျတယျလို့ ဆိုခဲ့ပွီး ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို ကိုငျမွောကျခဲ့တယျ။ အခု ပရီးမီးယားလိဂျဖလားကလညျး နီးစပျလာနပွေီဖွဈတယျ။
ဒီတော့ ယာဂငျကလော့ပျက ကီတာဟာ လီဗာပူးအတှကျ တောကျပလာမယျ့သူလို့ ယုံကွညျထားတယျဆိုရငျ ဒါက မဖွဈလာနိုငျဘူးလို့ ငွငျးဆနျဖို့ရာ သိပျကို ခကျခဲလှနျးပါတယျ။
The Athletic မှ လီဗာပူးသတငျးထောကျ James Pearce ရေးသားသညျ့ The Keita conundrum – how do Liverpool get the best out of him? ကို မှီးငွမျး ဖျောပွပါသညျ။
ZAWGYI – လီဗာပူးအသင်းသားတွေ webcam ကနေ ဆက်သွယ်စကားပြောပြီး အွန်လိုင်းလေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်တွေကို အတူတကွ လုပ်ဆောင်ကြတော့ ယာဂင်ကလော့ပ်က ဗီဒီယို ဖွင့်ဖွင့်ချင်းမှာ ဝမ်းသာအားရ ခေါ်လိုက်တာက “Naby lad” တဲ့။
မာဆေးဆိုဒ်ဒေသထဲက ဖွန်ဘီအရပ်မှာရှိတဲ့ နေအိမ်မှာ အခြားအသင်းဖော်တွေလိုပဲ နေအိမ်မှာပဲ လော့ဒေါင်း နေနေရတဲ့ ကီတာက ကတုံးဆံတောက် ဆံပင်ကေနဲ့။ သူက မန်နေဂျာကြီးကို ယောင်ယောင်လေးပြုံးပြတဲ့ အနေအထားနဲ့ ယောဂ လေ့ကျင့်ရေးကို ဆက်လုပ်နေခဲ့တယ်။
“ မင်းခေါင်းက အဲ့ကေနဲ့ ကြည့်ကောင်းတာပဲကွ ” လို့ ဗန်ဒိုက်က ရယ်မောပြီး ပြောတယ်။
ဂူနီယာကွင်းလယ်လူဟာ လီဗာပူးစီနီယာအသင်းသားတွေထဲမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးပါပဲ။ နိုင်ပွဲတွေရပြီးရင် အဝတ်လဲခန်းမှာ ကတတ်တဲ့ ကီတာ၊ မာနေးရဲ့ အရမ်းရင်းနှီးပြီး ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ ကီတာ။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်နွေမှာ လီဗာပူးကို ရောက်လာတဲ့ သူဟာ လီဗာပူးမှာ အသားကျလာနေပါပြီ။
ပင်ကိုယ်သဘောဝကိုက ကီတာက အရှက်ကြီးတယ်။ အင်္ဂလန်စာကို သင်ယူမှုတွေ လုပ်နေခြင်းကနေ အကျိုးအမြတ်တွေ ရလာနေဟန်လည်း ရှိတယ်။ မာဆေးဆိုဒ်မှာ သူ နေသားကျလာနေခဲ့တယ်။ သို့ပေမယ့် ကစားကွင်းမှာတော့ ကီတာက အခွင့်အရေးကောင်းတွေအတွက် ကြိုးစားနေရပါသေးတယ်။ လီဗာပူးကို ရောက်လာခဲ့တာ နှစ်နှစ် ရှိပြီဖြစ်ပြီး အန်ဖီးက မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးနဲ့အတူ သူ့ကို ပေါင် ၅၂.၇၅ သန်းထိ အသုံးပြုပြီး ခေါ်ယူခဲ့ရတယ်။
ကီတာဟာ သူ့ရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ပြသဖို့ အခွင့်အရေး စောင့်နေတယ်။ သူ့ရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှု အကောင်းဆုံး ပြန်ရောက်စေမယ့် အနေအထားကို စောင့်နေရခြင်းကြောင့် အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ်ကို အရေးနိမ့်ပြီး ထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ၁၆ သင်းအဆင့် ဒုတိယအကျော့ပွဲမှာ လီဗာပူးသမိုင်းအတွင်း တတိယမြောက် ပြောင်းရွှေ့ကြေး အမြင့်ဆုံး ကစားသမားက အရန်ခုံမှာတောင် ရှိမနေခဲ့ရဘူး။
လီဗာပူးအသင်းဟာ ၁၈ လအတွင်းမှာ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား၊ ယူအီးအက်ဖ်အေ စူပါလိဂ်၊ ကလပ်ကမ္ဘာဖလား ဆိုတဲ့ ဆုဖလားတွေ အနိုင်ရခဲ့တယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်ကို ဦးဆောင်ထားပြီး ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့လည်း နီးစပ်နေတယ်။ မန်နေဂျာ ယာဂင်ကလော့ပ် ခေါ်ယူထားတဲ့ ကစားသမားတွေထဲမှာ ကလပ်ရဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအပေါ် အကောင်းဆုံး ပြန်ပေးဆပ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးတဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ကစားသမားက ကီတာပါပဲ။
လီဗာပူးက သူ့အတွက် အသင်းပြောင်းကြေး ပေါင် ၄၈ သန်းကို ပေးပြီး ခေါ်ယူထားခဲ့တယ်။ သူကို ခေါ်ယူခဲ့တာဟာ ကလော့ပ်ရဲ့ တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပဲ ဖြစ်တယ်။ ပေါင် ၅၂ သန်းထိ ပြောင်းရွှေ့ကြေး မြင့်တက်သွားနိုင်တဲ့ ကီတာဟာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ဘွန်ဒက်လီဂါအတွင်း ၃၁ ပွဲကစားကာ ကိုယ်တိုင် ၈ ဂိုးသွင်းပြီး ဂိုးထောက်ပံ့မှု ၈ ကြိမ် လုပ်ပေးခဲ့တယ်။
ကလော့ပ်က ကီတာဟာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ကွင်းလယ်လူလို့ ယုံကြည်ပြီး အရခေါ်ယူစေခဲ့တယ်။ ကီတာက ဖန်တီးမှုနဲ့ ဖျက်ဆီးမှုဆိုတဲ့ ကွင်းလယ်တာဝန် နှစ်ရပ်လုံးကို အကောင်းဆုံး လုပ်နိုင်တယ်။ မန်နေဂျာကလော့ပ်နဲ့ သေသေချာချာ ဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့တဲ့ ကီတာကို သူ့စိတ်ကြိုက် နံပါတ်ဖြစ်တဲ့ ကျောနံပါတ် ၈ ဝတ်ဆင်ကစားခွင့်ရဖို့မှာ ပရိသတ်တွေ အမြင်မကြည် မဖြစ်စေဖို့ စတီဗင်ဂျရတ်ကိုယ်တိုင် မဲဝုဒ်မှာ ဂျာစီ လာပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။
ကီတာရဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းက လီဗာပူးပရိသတ်တွေ များပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ဂျရတ်ကို စံပြအဖြစ် လေးစားပြီး ကျောနံပါတ်ကိုယ်တောင် နံပါတ် ၈ ကိုပဲ ဝတ်လေ့ရှိတာပါ။ နယ်မြေသစ်ကို စတင် ခြေချချိန်မှာ လီဗာပူးသမိုင်းမှာ အကြီးကျယ်ဆုံး အသင်းခေါင်းဆောင်တွေထဲက တစ်ဦးရဲ့ ဂျာစီကို ဝတ်ဆင်တာက ကီတာကို ဖိအားပိူများစေခဲ့တာလို့ ဒီဒီဟာမန်းက ယူဆထားတယ်။
သူ့ရဲ့ လီဗာပူးကစားသမားဘဝ ပထမဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့ ဝက်ဟမ်းနဲ့ပွဲမှာတော့ ကီတာဆိုတာ ဘယ်လို ကစားသမားလဲ အားလုံး မြင်ခဲ့ရတယ်။ ကွင်းလယ်မှာ အားကောင်းတယ်၊ ပေါက်ကွဲအားကောင်းပြီး လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်း ရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ကြံ့ခိုင်မှုဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်ဖို့ လိုအပ်ခြင်း၊ ကလပ်နဲ့ လက်ရွေးစင်ကြား ရွေးချယ်ရခြင်းတွေမှာ သူ့ရဲ့ ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်က အတော်လေးကို လျော့ကျသွားခဲ့တယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တောင်းဆိုမှု အရမ်းကြီးတာကို ကီတာ ဝန်ခံပါတယ်။
ကီတာက ကံတရားရဲ့ ဖေးမမှုလည်း နည်းနည်းလိုခြင်းကို ရင်ဆိုင်နေရတယ်။ သူက အချို့ပွဲတွေမှာဆိုရင် သိပ်ကောင်းတယ်။ ကြံ့ခိုင်မှု ပြန်ကောင်းလာသလို ကလော့ပ်ရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ခံရပြီး ဘာစီလိုနာနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားရတဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဆီမီးဖိုင်နယ် ပထမအကျော့ပွဲမှာ ပွဲထွက်လူစာရင်းကနေတောင် ပါဝင်နေပေမယ့် ဒဏ်ရာကြောင့် မက်ဒရစ်မှာကစားတဲ့ တီကိုနဲ့ပွဲကို လွဲခဲ့ရပြန်တယ်။
ခြေစွမ်းကောင်းနေချိန်မှာ ဒဏ်ရာပြန်ရခဲ့တာက သူအတွက် ခက်ခဲပါတယ်။ နောက်ပြီး ကစားသမားတိုင်း အိပ်မက်မက်ရတဲ့ ဗိုလ်လုပွဲကို ဒဏ်ရာကြောင့် သူမပါနိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒဏ်ရာကိစ္စက မပြီးပါပြီး ဂူနီယာအသင်းက လက်ရွေးစင်အတွက် ခေါ်တော့ ရာသီကြိုကို လွဲခဲ့ရပြန်တယ်။ အဲ့မှာရခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာကြောင့် စူပါကပ်ပွဲအဖြစ် ချယ်ဆီးနဲ့ပွဲကို ထပ်လွဲပါတယ်။ စက်တင်ဘာလအထိ မပါနုင်ိသလို နောက်ပိုင်းမှာ အဖျားရောဂါ၊ အသေးစား ကြွက်သားဒဏ်ရာတွေ ထပ်ရခဲ့တယ်။
လီဗာပူးကွင်းလယ်မှာ ဟန်ဒါဆန်၊ ဝိုက်နယ်ဒမ်၊ ဖာဘင်ညို၊ မီလ်နာ၊ ချိန်ဘာလိန်တို့တွေက ကီတာကို ကျော်ပြီး ပွဲထွက်ခွင့်တွေ ရထားကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကစားသမားတွေ အားလုံးထဲမှာ ဖန်တီးမှုအတွက် အမြင်ရှိတဲ့ အပိုင်းမှာတော့ ကီတာက အားလုံးထက် သာပါတယ်။ လီဗာပူးကွင်းလယ်လူတွေ တစ်ရာသီ သွင်းဂိုး ၁၀ ဂိုး ရယူပေးဖို့ ခက်ခဲပေမယ့် ကီတာအတွက်ဆိုရင်တော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါက ကလော့ပ်ရဲ့ ယုံကြည်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကလော့ပ်က ကီတာဟာ ကွင်းလယ်မှာ အခြားသူတွေနဲ့ ခြားနားသူလို့ မြင်တယ်။ ကလော့ပ်က “ နာဘီနဲ့ ချိန်ဘာလိန်က ပင်ကိုယ်သဘာဝ မတူကြဘူး။ နာဘီက ပိုကောင်းကောင်း ကစားနိုင်ပြီး ကစားတာ ပိုကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့တာကြောင့်တော့ အခွင့်အရေး ပိုရမှာ မဟုတ်ဘူး ” လို့ ဝန်ခံထားတယ်။
လီဗာပူးကွင်းလယ်လူတွေဟာ ပေါက်ကွဲအားကောင်းပြီး စိတ်ဓါတ် ပြင်းထန်ကြတယ်။ ကီတာမှာက မတူညီတဲ့ အရည်အချင်းတစ်ရပ် ရှိပါတယ်။ သူက အတွင်းလူနေရာကနေ ကစားနိုင်သလို ပြိုင်ဘက်အသင်းရဲ့ နေရာလွတ်တွေကို အသုံးချပြီး လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ ဘောလုံးဥာဏ်ရည် ပိုမြင့်သူဖြစ်တယ်။ အဆုံးသတ်ပိုင်း နယ်ပယ်တွေမှာ ကီတာက ကျန် ကွင်းလယ်လူတွေထက် ပိုကောင်းသူဖြစ်တယ်။
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘောလုံးရာသီမှာ ကီတာဟာ ၄ ပွဲကိုပဲ ပွဲထွက်လူစာရင်းက ကစားရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘောလုံး လှိမ်ခေါက်မှု အောင်မြင်အောင် အများဆုံး လုပ်နိုင်တဲ့ ကစားသမားတွေထဲ ပါပါတယ်။ လီဗာပူးရဲ့ ဘောလုံးစကေး အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ ဖာမင်နိုတောင်မှ လှိမ်ခေါက်ကျော်ဖြတ်မှုမှာ ၅၉% ပဲ အောင်မြင်ပေမယ့် ကီတာက ၇၃% ရှိတယ်။
လီဗာပူးက ဘယ်လိုပြိုင်ဘက်ကို ရင်ဆိုင်နေရသလဲအပေါ် မူတည်ပြီး ကလော့ပ်ရဲ့ နည်းစနစ် အပြောင်းအလဲမှာ ကီတာက အရေးပါလာနိုင်ပါတယ်။ ကီတာက ဘောလုံးမရှိချိန်မှာ လှုပ်ရှားမှု နည်းတယ်၊ ပြိုင်ဘက်တွေ ဘောလုံးပေးနေရင် လိုက်ပြီး ပိတ်ဖို့ဆိုတဲ့ အချက်မှာ သူက အားနည်းတယ်။ ဒါပေမယ့် လီဗာပူးက ပြိုင်ဘက်ကို လွှမ်းမိုးကစားပြီး ပြိုင်ဘက်က ခံစစ်မှာပဲ ပိတ်ကစားပြီဆိုရင်တော့ ဒါမျိုးက ကီတာအကြိုက်ပါပဲ။ သူ မွှေနှောက်ကစားပါတော့မယ်။
“ ဘွန်ဒက်လီဂါမှာတုန်းက ကီတာဟာ အကောင်းဆုံး ကွင်းလယ်တိုက်စစ်သမားတွေထဲ ပါဝင်သူပါ။ သူက လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကစားရသူလို့ မပြောလိုပေမယ့် အချိန်အများအပြားမှာ သူလုပ်ချင်တဲ့အတိုင်း ကစားခွင့်ရခဲ့တယ်။ တိုက်စစ်ကို ဘောလုံးနဲ့အတူ မောင်းနှင်နိုင်ပြီး ဧရိယာထဲ ဝင်ရောက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။
ကလော့ပ်က သူ့ကို ကစားစေလိုတဲ့အတိုင်း ပေးမကစားဘူးလို့ မပြောပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့နားမှာကလည်း ထူးချွန်တဲ့ ကစားသမားတွေ ရှိနေတယ်။ လိုက်ဇစ်မှာဆိုရင် ကီတာက အဓိကလူပဲ သူကစားချင်သလို ကစားလို့ရတယ်။ လီဗာပူးမှာက နောက်ထပ် ငါကြီးကြီးတွေ ရှိနေတယ်။ ကိုယ်နေရာ ကိုယ်ရှာနိုင်ဖို့လိုတယ်။
လီဗာပူးမှာ တိုက်စစ်သမား သုံးဦးနဲ့ ကစားရတာက လိုက်ဇစ်မှာနဲ့ တူမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဖာမင်နိုက တီမိုဝါနာလို မဟုတ်ဘူး။ သူက တကိုယ်တော် မကစားပဲ ချိတ်ဆက်ကစားတဲ့သူ။ လီဗာပူးက ကွင်းလယ်လူတွေရဲ့ တိုက်စစ် မောင်းနှင်မှုကို အားမကိုးဘူး။ အဲ့တာထက် ဘောလုံးကို ခပ်မြန်မြန် ပြန်ယူပြီး အသင်းဖော်တွေကို ဘောလုံးပေးမှုနဲ့ ပွဲထဲ ပြန်ဝင်လာတတ်ကြသူတွေ။
တိုက်စစ်သုံးယောက်ကလည်း အခွင့်အရေး ဖန်တီးမှုမှာ ကိုယ်တိုင် လုပ်နိုင်တဲ့ ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးတွေ။ သူတို့မှာ တောင်ပံသမားတွေလို ကစားနိုင်တဲ့ အစွန်သမားတွေရှိတယ်။ ဒီတော့ ကီတာရဲ့ ကွင်းလယ်မှာ ဖန်တီးရှင်လို ကစားမှုက အသင်းကို ဟန်ချက် မညီမှုတွေ ဖြစ်စေတယ်။ အဲ့တာကပဲ ကီတာက သူ့ရဲ့ အရည်အချင်းကို အပြည့်အဝ မပြနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်း ဖြစ်နိုင်တယ် ” လို့ ဟားမန်းက သူ့အမြင်ကို ရှင်းပြခဲ့တယ်။
လီဗာပူးအသင်းက နွေမှာ ကွင်းလယ်အတွက် အင်အားဖြည့်မှုကြီးတွေ မလုပ်ဘူးလို့ သတင်းထွက်ထားတယ်။ ဒါကလည်း ချိန်ဘာလိန်နဲ့ ကီတာတို့ကို နေရာပေးလိုခြင်းကြောင့်ပါပဲ။ ပေးရတဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ ထိုက်တန်အောင်တော့ ကီတာက ခြေစွမ်း မပြထားနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကီတာကို ယုံကြည့်သူက ကလော့ပ်ဖြစ်တယ်။ ကလော့ပ်ဟာ သူ့ကို ယုံကြည်ရင် လေးနှစ်အတွင်း ဆုဖလားယူပြနိုင်တယ်လို့ ဆိုခဲ့ပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ကိုင်မြောက်ခဲ့တယ်။ အခု ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကလည်း နီးစပ်လာနေပြီဖြစ်တယ်။
ဒီတော့ ယာဂင်ကလော့ပ်က ကီတာဟာ လီဗာပူးအတွက် တောက်ပလာမယ့်သူလို့ ယုံကြည်ထားတယ်ဆိုရင် ဒါက မဖြစ်လာနိုင်ဘူးလို့ ငြင်းဆန်ဖို့ရာ သိပ်ကို ခက်ခဲလွန်းပါတယ်။
The Athletic မှ လီဗာပူးသတင်းထောက် James Pearce ရေးသားသည့် The Keita conundrum – how do Liverpool get the best out of him? ကို မှီးငြမ်း ဖော်ပြပါသည်။
NEWS: ပရီးမီးယားလိဂျကို ပွနျစတငျရငျ ကှငျးထဲကို လူဘယျလောကျ ဝငျခှငျ့ပေးမလဲ စတငျ ရတှေကျ